Baahida Saacadda "Networking Industry" - CISCO
Warshadaha IT-ga oo ah kuwa ugu muhiimsan ee ka mid ah warshadaha ugu caansan ka dib warshadaha sababtoo ah jilitaankooda illaa xirfad, mag-dhaw, tixgelinta iyo mucaaradka ay leeyihiin. Baahida xaaladaha joogteynta, horumarinta iyo kobcinta ganacsiga IT-da ayaa ka dhigay fikradda ah "Networking" iyo horumarka degdega ah, iyo horumarka "Networking" wuxuu abuuray "khubaro" qaybtan. Iyada oo xiiso weyn u leh khubaradaas oo ay kaftamaan helitaanka sahlan ee fudud iyo kor u kacaya, xiisaha loo qabo "Professional Professions" ayaa sameeyay. Maanta, xitaa helitaanka "Xirfadlayaasha Diyaarsan" ma ahan dhammaan dhibaatadaas, iyo baahida muhimad wayn ayaa loo badalay "Xirfadlayaal Baahan" kuwaas oo lagu dhajiyay qalab isku xiran, nidaam, iyo hawlo. Qirashooyinka "Xirfadlayaasha Gaarsiisan" waxay sabab u yihiin habka ay u diyaargaroobeen ama loo xaqiijiyay goynta, isku dhafka iyo barnaamijyada shabakadaha la xiriira ee suuqa. Waxaa si weyn u cambaareeyay "Takhasusayaasha Baxsan" waa kuwa la xaqiijiyay "CISCO" .. !!
Waa maxay sababta Certified Certification CISCO "Prestigious"?
Aqoonsiga CCNA ama Tababarka CCNA
Halkee laga helaa xaqiijinta?
CISCO waa lord of "Networking Industry" iyo fursada aad ku qanacsan tahay ama u dhiibay taliyaha si cad oo aad u rogto "Nimanka King". Dhammaan waxyaalaha la tixgeliyey, tani waa hal sababood, laakiin runtu waxay tahay in CISCO hubinayaan khabiiro badan oo fahamsan shabakadaha shabakadaha, shayada, shabakadaha kala duwan ee isku dhafan deegaan iyo habka, inta badan alaabooyinka warshadaha nadaamka habka noolaha adduunka ee maanta, waxay ka socdaan CISCO. Maanta CISCO waa hal-abuur, aan la tartami karin, hoggaanka guud ee ganacsiga xiriirka. Waxay jawaab u bixisaa macaamiisha qalabka ee kala duwan ee shabakadaha kala duwan si ay ugu dadaalaan iskaashiga, waxay keenaan helitaanka iyo is-weydaarsiga xogta shakhsiyaadka fudud, iyadoo aan loo eegin noocyada waqtiga, goobta iyo marxaladaha. CISCO waxa ay qeexaysaa xallinta shabakadaha dhamaadka-dhamaadka ah, taas oo awood u siinaysa qaabdhismeed caadi ah si loo siiyo maamulayaasha shabakadaha la saadaaliyo. Xitaa waxay bixisaa qalab aad u ballaaran oo qalabka si loo xoojiyo Cisco Internetwork Operating System Software. Taasi waa sababta shirkadaha iyo ururradu ay waydiinayaan danta khabiir ee CISCO yaqaana, macquul ahaan "Certification CCNA". Tababarka "Cisco Certified Network Associate" waa jawaabta maanta ee ah inaad siiso farsamaynta shabakadaada.
Waa arrin aad u xiiso leh in la baaro sida iyo markii CISCO loo soo jeestay inay noqoto super superower ee ganacsiga network. Waxay u socotaa waddada 1980 markii Len Bosack iyo Sandy Bosack, ay labaduba ka shaqeeyaan xafiisyada PC-da ee jaamacadda Stanford University waxay sameysteen server halkaas oo ay ku isticmaali karaan kombuyuutarkooda iyaga oo isticmaalaya heshiiska IP-ga. 1984 waxay aasaaseen "Cisco Systems" kadibna 1992 magaca magaciisa waxaa loo badalay "CISCO Systems, Inc.". Waqtigaasi waxay sameysteen "Bandhigga Bandhigga" oo maanta la yiraahdo "Qalabka Alphabet Soup Products" sida, AGS; MGS; CGS; IGS iyo AGS +. Sannad gudahood CISCO waxay soo gudbisay wareegyo isbedel ah oo 4000 ah, 7000, 2000, iyo 3000 wareegyo habeyn ah. Ka hor intaan dheer CISCO waxay u beddeshay hay'adda ugu khatarsan ee loo baahan yahay ee ganacsiga isgaadhsiinta. Taasi waxay keentay nooc kale oo imtixaan ah iyaga, taas oo ah habka loo ilaaliyo heerarka iyo meelaha kala duwan. Inay leeyihiin qalab adag iyo qorshe hawleed loo baahan yahay si ay u soo bandhigaan, kormeeraan una baaraan. Jawaabta ugu haboon waxay timid - Barnaamijka Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). Ujeeddadu waxay ahayd mid aasaasi ah - qalab badan oo loo baahan yahay in la soo bandhigo khabiiro khibrad u leh oo sidoo kale sameeya kormeer iyo baadhitaan marka loo baahdo. Barnaamijku wuxuu diyaariyey khabiiro kuwaas oo dhammaantood qaadi kara oo fulin lahaa sida loogu baahan yahay. Barnaamijku wuxuu u xaqiijiyey shakhsiyaadka heerarka kala duwan ee awoodda khaaska ah, kontaroolidda qorshayaasha shabakadaha iyo xoojinta taasoo keentay in dhammaan siyaabaha loo furo, taas oo mararka qaar ku xidhnayd lamaane. "Aqoonsiga CCNA" waa tallaabada ugu horreysa ama waxaad u yeeri kartaa "dhagxaanta dhagxaanta" ee qaabkan.
Shahaadada CCNA waa shahaadada khasabka ah ee shakhsi kasta oo aqoon korodhsi leh oo ubaahan in ay CISCO ku qanciso. Dhammaan shahaadooyinka kale waxay qaadataa shahaadadan asaasiga ah. Faa'iidooyinka kuqoran aqoonsiga CCNA / Certification waa dad badan, si loo qoro lamaanaha -
Ururadu waxay helayaan nidaam ku habboon si ay u qiyaasaan xirfadaha khabiir ku shaqeyn kara markabka habboon ee bulshada diirada saarta biological. Waxay u haysan karaan tan sida caadiga ah ee loo dooranayo tartame.
Shakhsiyaadka waxaa loo qaabeeyey awood ay u leeyihiin inay fahmaan, soo bandhigaan oo ay wax ka qabtaan Nidaamka Nidaamka Nidaamka ee Cisco iyo qalabka Cisco. Waxa intaa ka sii dheer, nuts iyo bolts ee shabakada internetka waxaa lagu daraa bartilmaameedka ah in laga yaabo inay ku faafaan jawi "Non-Cisco".
Tababarka CCNA wuxuu ku siin doonaa marxal ah halkaasoo shahaadadaada CCNA ay noqoto mid loogu talogalay xirfad wax ku ool ah oo qadarin leh.
Shahaadadaada CCNA waxay si ku meel gaar ah kuu caawineysaa inaad fidiso ka baxsashada khibradaha khabiirnimada, gudaha iyo dibada ururada.
Waxaad u qalantaa si cad oo aad uqalantay shahaadooyinka dheeraadka ah, markaad tahay CCNA Certified, sida - CCNP (Cisco Certified Network Professional); CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) CCDA (Cisco Certified Design Certification) iyo CCDP (Cisco Certified Design Professional).
Waxaa laguu tixgelinayaa in aad tahay macallin isku xiran, aqoon leh, oo macquul ah go'aaminta dhibaatooyinka isku-xirka ama isu-yeedhida shabakadaha heerka sare.
Aqoonsiga sare, oo ah aqoon sare u leh shabakadda CCNA, marka la barbardhigo wixii shahaadooyin kale ah oo kale oo sidoo kale ujeedada ka dambeysa codsiga. Adigu waxaad ufududaysaa iyadoo aan loo eegin suurtogalnimada inaadan haysan sannado badan oo khibrad ah oo lagu daray maaddooyinkaaga.
Si kastaba ha ahaatee waa inaad ka warqabtaa awoodda asaasiga ah ee aad u baahan tahay in aad ogaato inaad la kulantid shahaadada CCNA ama Waxbarashada CCNA.
La socotaa waa laba ka mid ah asaasiga asaasiga ah ee aad u leedahay-
Fahmitaanka LAN-ga aasaasiga ah, ee shabakadaha WAN iyo LANE, maamulkooda, dejinta iyo sida loo shaqeeyo.
Qalbig ama sameeysid shabakad iyo nuts iyo baqshiinka IP, IPX, Shaxanka Socodka, Ethernet, iyo VLANs.
Kala soocitaanka galalka fog, barashada araajida cusub sida ganacsiga internetka, warbaahinta interaktifka, iyo wixii la mid ah.
Waa inaad ka heshaa tababarka CCNA aasaas ka ah xirfad ahaan kormeerid iyo awood u yeelatid inaad heshid shuruudaha sare ee macluumaadka iyadoo la dhisayo istiraatijiyad casri ah oo ku tusaya kor u qaadida habka shabakada, kormeerida shabakad ee xaalad habboon iyo tijaabo, iyo weliba sida loo shaqeeyo Isgaadhsiinta. Waa inaad diyaargarowdaa sida shuruudaha ururka ee awooda khaaska ah ku qanacsan yihiin. Waa inaad heshaa macluumaadka ruqsada ah ee khaaska ah, heshiisyada iyo awoodda maamulka ee si habboon u gudbin kara kartida marka ay khibrad ku jiraan xaalad macquul ah. Waa inaad ka qaadataa lacag aad u fog oo ku socota jidka Cisco iyo koorsooyinka shahaadaynta. Qaar ka mid ah mawduucyada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato waa -
Noocyada Laydhka leh iyo doorbidiisa
Habka tixraaca OSI iyo duruufaha wanaagsan
Todoba lakab oo OSI ah
Qalabka laydhka socodka ee lakabka
Xakamaynta wareega iyo xogta
Qalabka Cisco wax ka beddel
Horumarinta LAN-ka, Is-beddelka noocyada iyo ka shaqeynta lakabka x-2
Qaabka dhismaha maamulka IOS
Tilmaamayaasha Tilmaamaha iyo Habsamida IP
Cisco Internetwork iyo maamulkeeda
Novell IPX iyo naqshadeeda
Waxa lagama maarmaan ah
Adeegyada Kaabayaasha, Amniga, iyo Maamulka
Si toos ah loo dhigo, ujeedadu waa in ay bartaa LAN khadad badan oo kala duwan, waxay kormeeraan VLANs, naqshadeynta OSPF iyo EIGRP, waxay la shaqeeyaan awoodda shabakada, faa'iidooyinka daruuriga ah iyo baaridda dhibaatooyinka isku-xirka ee hawlaha fudud ee shabakadda.
Tababar CCNA ah oo ku saleysan habdhaqan iyo waayo-aragnimo ayaa ah waxa lagaa rabo in aad u jihaysatid oo aad qaadatid. Ururada sida - "KOENIG Solutions" oo ku habboon xarumaha tababarka takhasuska iyo shahaadooyinka si ay ugu rajo geliyaan rajada, fahamka, iyo khubarada, dhammaan dhinacyada isgaarsiinta ee baahida loo qabo. Waxay qabaan wax ka badan 300 oo la xaqiijiyay in ay yihiin khabiiro khabiir ah oo ka shaqeeya goobahooda. "KOENIG Solutions" waxaa loo arkaa inay yihiin horjoogayaal caalami ah oo ku jira tababar isku xira. Waxay qaadaan habab tababar ah oo ka yimaada fasalka tooska ah ee khibrada masraxa, si ay uugu soo diraan qof masaajid ah oo ka socda agagaarkaaga. Qof kasta oo raadinaya xirfad aad u wanaagsan oo isku xira, ka soo kicinta khibrad si khibrad u leh wuxuu ka heli karaa shahaadada CCNA.
Waxay u badan tahay in ay wax u haystaan ​​sidii wax dheeraad ah oo aad awood u leedahay kartidaada aduunka ee aadka u xoogan oo ku saabsan warshadaha shabakada waa arrin aad u aasaasi ah oo leh wax noocaas ah. Ma aha wax shahaadooyin ah oo shaqeynaya laakiin halkii ay ku kordhin lahaayeen macquulnimada, wax barashada, astuteness, xogta iyo aragtida taas oo kugu sii wadi doonta si wax ku ool ah oo wax ku ool ah dhammaan duruufaha xaaladaha xiriirka. Markaad tahay CCNA Shahaadada waa la dhammeeyaa waxaa laguu aqoonsaday caalam ahaan iyadoon loo eegin lahjadda iyo cilaaqaadka culus. Waxaad sidoo kale u jeesaneysaa faafinta xogta iyo fikradaha oo markaad u dhexjirto habka saxda ah aysan ahayn ururo faa'iido leh oo abuuraya ururo faa'iido leh waxa intaa ka sii faa'iideysan doona dadka kugula jira dhammaan ururada. Hirgelinta shahaadada CCNA waa, si kastaba ha ahaatee, walwal ah waliba badeecada dabiiciga ah ee aad u dhalatay ayaa ah mid aad u macaan, waxaana ay ku siin doontaa fursad aad ku dhaafto mid kasta oo ka mid ah dhibaatooyinka. Waxaa la sheegay in aysan jirin wax fikrado ah oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan guulaha si kastaba ha ahaatee ee shabakadda shabakada waxaa hubaal ah mid ka mid ah - waa shahaadada CCNA.